TSY NAMAN’IZAY MIHEMOTRA! – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 octobre 23, 2015 Laisser un commentaire sur TSY NAMAN’IZAY MIHEMOTRA!
« aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro. » Hebreo 10:25
Tany am-boalohany dia nataon’Andriamanitra Ray mpamorona antsika ho mpiara-miasa aminy isika olombelona, ka notendreny hitandrina ny saha i Adama. Ny zavatra voahariny rehetra dia hitany fa tsara, ary ny olombelona no nametrahany ny fitokisany hikarakara izany. Saingy indrisy, tsy nijanona ho mpitandrina ny saha ihany ny olona fa ny haninana an’Andriamanitra no nataony, hany ka dia naniratsira Azy. Ary dia simba ny fifandraisany tamin’ny Ray. Teo no niditra ny fahotana, ary teo no nihatra ny fahafatesana.
***Izany no fihemorana voalohany, ka na dia lohany tamin’ny zava-boahary aza ny olombelona dia nihemotra ho latsaka ambany noho ny zava-boahary, fa lasa nanompo menarana, ary taty aoriana aza dia nanompo taratasy, dia ny vola izany!
***Ny tantara voalaza ao amin’ny Matio 21:33-44 dia milaza ny amin’ny mpiasa tany izay nametrahan’ny tompontany fitokisana ka nasainy nikarakara ny tanim-boaloboka, kanjo rehefa lasa ny tompontany ka naniraka ny mpanompony hitaky ny vokatra dia novonoin’ireo mpiasa-tany ireo mpanompo ireo, ary raha ny zanany no nirahany tamin’ny farany dia novonoiny koa satria lazainy fa mpandova. Io no hanoharana ny zanak’Isiraely izay nofidin’Andriamanitra ho olony kanjo rehefa nanirahan’Andriamanitra ny mpaminaniny, dia nosotasotainy, novonoiny ireny mpaminany ireny, ary na dia ny zanany i Jesosy Kristy aza dia hitany novonoina!
*** Isika kristiana koa, izay mpanaradia an’i Kristy, tamin’ny fiandohan’ny fahatokiantsika Azy dia nilokaloka sy feno hafanam-po tamin’ny asa fanompoana, kanefa indrisy rehefa sendra ny sarotra fizahan-toetra dia nihemotra, ary misy aza mivarilavo mihitsy! Tsy izany va no fandefonana an’i Kristy amin’ny fahotana maharikoriko an’Andriamanitra! Aiza ilay finoana? Toa isika kristiana indray no mitarika ny jentilisa tsy hanaja ny andro natokana hivavahana! Toa feno fanahiana, ka tsy mahalala ny andro hanompoana ny Tompo! Amin’izao andro farany izao indrindra isika no tokony ho velon’ny finoana, fa raha mihemotra isika dia tsy sitraky ny Fanahiny! Raha isan’izay nihemotra ary ianao dia miverena haigana fa miantso anao ny Tompo, izay rehetra manatona Azy dia tsy ho laviny mihintsy!
Publié parfilazantsaramada octobre 23, 2015 Publié dansUncategorized